Robert De Niro akakuvara pane seti yemuvhi Killers yeRuva Mwedzi | Ndinobva mac
Ignacio Sala | 17/05/2021 22:00 | dzakawanda
Mavhiki mashoma apfuura, cast yakapedzwa yeinotevera Martin Scorsese bhaisikopo yeApple TV +, saka yaive nyaya yenguva isati yatora mafirimu. Vhiki rapera, Leonardo DiCaprio akagovana mufananidzo kubva kupfura kuburikidza neiyo Twitter chiteshi, ichisimbisa kuti yakanga yatotanga.
Mumwe weakakura manhamba e cinema anova chikamu chemamwe mafirimu aMartin Scorsese, kusanganisira ekupedzisira ndiRobert De Niro. Chaizvoizvo mutambi uyu, akatambura nenjodzi diki, iyo yakatanga ichinzi yaive panguva yekutora firimu.
Zvinoenderana nepakati peTMZ:
Robert De Niro ari kuenda kumba mushure mekukuvara paakashanda pachirongwa chiri kuuya uye chinotarisirwa kwazvo chaMartin Scorsese naLeo DiCaprio.
Zvigadzirwa zvekugadzira pamwe nezvinyorwa zvine chekuita naDe Niro zvinotitaurira kuti mutambi akakuvadza gumbo rake achitora "Killers of the Flower Moon" muOklahoma.
Akatora ndege kunonoka China kuenda kumba kwake kuNew York uye akarongerwa kuona chiremba neChishanu. Kukura kwekukuvara hakuna kujeka.
Mazuva apfuura, iyo midhiya inosimbisa kuti DeNiro akatambura kukuvara uri mudhorobha rekutora, kwete uchiita zvekutora. Svikiro zvakare rinotaura kuti kutora kweiyo firimu kuri kuenderera mberi sezvazvakange zvakarongwa, sezvo DeNiro anga atopfura zvinoonekwa panguva iyoyo nenzvimbo.
Pari zvino hazvisi pachena kuti kukura kwekukuvara kwakadii, asi haifanire kunge iri chero chinhu chakakomba. Zvingangodaro, mumazuva mashoma anotevera, uyu mumwechete wepabloid wepakati achatizivisa nezve zvakaitika kune uyu muridzi wemakore makumi manomwe nemapfumbamwe mutambi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Robert De Niro akakuvara pane seti yemuvhi Killers yeRuva Mwedzi